'अस्ट्रेलियाको नागरिकता त्याग्न मैले के गर्नुपर्छ ? '
मैले अस्ट्रेलियाको नागरिकता लिएको तीन वर्ष भयो तर अब म स्थायी रुपमै नेपाल गएर बस्ने सोचमा छु । अस्ट्रेलियाको नागरिकता त्याग्न मैले के गर्नुपर्छ ?
तपाईंको प्रश्नको सन्दर्भमा हेर्दा अस्ट्रेलिया र नेपाल दुवै देशको कानुन विचार गर्नुपर्ने हुन्छ । १८ वर्षभन्दा बढी उमेरका अस्ट्रेलियाली नागरिकले अस्ट्रेलियाको नागरिकता त्याग्न चाहेमा त्यसो गर्न पाउने प्रावधान छ ।
तर, अस्ट्रेलियाले ‘राज्यविहीनता न्यूनीकरण सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धि’मा हस्ताक्षर गरेको हुनाले उसका केही शर्तहरुको पालना भने गर्नुपर्ने हुन्छ । दोहोरो नागरिकताको व्यवस्था भएका देशका नागरिकहरुका सम्बन्धमा खासै समस्या पर्दैन, किनभने अस्ट्रेलियाको नागरिकता त्यागे पनि ऊसँग अर्को देशको नागरिकता हुन्छ ।
तर, नेपालले अझै पनि दोहोरो नागरिकताको व्यवस्था नगरेको हुनाले अस्ट्रेलियाले त्यत्तिकै यहाँको नागरिकता त्याग्न दिँदैन किनभने त्यसो गर्दा तपाईं राज्यविहीन हुन पुग्नुहुन्छ ।
नेपालको नागरिकता ऐन २०६३ को दफा ११ अनुसार भने विदेशी नागरिकता लिएको नेपाली नागरिकले नेपाल फर्केर सम्बन्धित अधिकारी सामु आफ्नो विदेशी नागरिकता त्यागेको प्रमाण पेश गरेमा उक्त प्रमाण दर्ता गरेको मितिबाट निजलाई पुनः नेपाली नागरिकता प्राप्त हुने व्यवस्था छ ।
नेपालको यस्तो कानुनी प्रावधानलाई हेरेर अस्ट्रेलियाले तपाईंलाई नागरिकता त्याग्ने अनुमति दिनसक्छ । तर यो केही प्राविधिक र जटिल विषय भएको हुनाले निर्णय गर्नुभन्दा पहिले एकपल्ट अस्ट्रेलियाली र नेपाली अधिकारीहरुबाट जानकारी लिनु उपयुक्त हुन्छ ।